QM Oo Cambaareeyey Weerarkii Hotel Saxafi – Radio Daljir
Nofeembar 2, 2015 4:39 b 0
Isniin, November 02, 2015 (Daljir) —Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaasiweyn u cambaareeyey weerarkii dhimashada iyo dhaawaca sababay ee gelinkii hore ee shalay ururka Alshabaab ku qaaday Hotelka Saxafi ee Magaalada Muqdisho.
“Xubnaha golaha amaanka waxay tacsi u dirayaan qoysaska dadkooda waxyeelada kasoo gaartay weerarka, si lamid ah shacabka iyo dowlada Soomaaliyeed tacsi ayay golaha amaanka u dirayaan, iyagoo kaga tacsiyeynaya weerarkii hotel Saxafi”.
Golaha amaanka ayaa qoraalkooda ku sheegay iney amaanayaan jawaabta weerarkaasi shalaya ay ka bixyeen ciidamada qaranka Soomaaliya oo kooxdii weerarka qaaday ku dilay dhismaha hotelka, sida warbixinta lagu sheegay.
Dhanka kalena golaha ammaanka ayaa sheegay inay dhammaantood isku raacsan yihiin dagaalka kadhanka ah kooxaha ka dambeeya ammaan xumida Soomaaliya, si bay dheheen loogaaro xasiloonida guud ahaan wadanka Soomaaliya.
“Xubnaha golaha amaanka waxay markale xaqiijinayaan in Noocyada Argagixisada ay yihiin mid kamid ah qatarta amaanka iyo xasiloonida, waana dambiilayaal meel kasta oo ay joogaan”ayaa lagi yiri qoraalka golaha amaanka.
Ugu dambayntiina golaha ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa ka dalbaday dalalka beesha caalamka inay sidhowey ula shaqeeyaan dowladda Soomaaliya, waxaana ay balanqaadeen inay dhankooda garab iyo gacan u noqon doonaan.